नेकपा सल्लाहकार समितिका सचिव आलेको आवास उद्घाटन – eratokhabar
नेकपा सल्लाहकार समितिका सचिव आलेको आवास उद्घाटन
कमल सुस्लिङलेखकका सबै लेख-रचना हेर्नुस्
ई-रातो खबर २०७५, १८ असोज बिहीबार २१:१३ October 4, 2018 563 Views
जनकपुर : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका सचिव चित्रबहादुर आले ‘पवन’ को आवास भवन उद्घाटन गरिएको छ । नेपाल कम्युनिस्टका पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वी कमान्ड इन्चार्ज अनिल शर्मा विरहीले प्रमुख अतिथिका रूपमा आलेको भवन बिहीबार उद्घाटन गरेका हुन् । सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरी आरम्भ गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि विरहीले रिबन काटेर आलेको आवास भवन उद्घाटन गरेका थिए ।
कार्यक्रममा विरहीले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रज नेता चित्रबहादुर आलेको ऐतिहासिक आवास भवन उद्घाटन गर्न पाउँदा गर्वका साथै खुसी लागेको बताए । आवास निर्माणका लागि पार्टीले थोरै सहयोग गरे पनि भवन सम्पन्न गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने श्रेय आलेका जेठा छोरा योगिन्द्र आलेको रहेको भन्दै विरहीले उनलाई विशेष धन्यवाद पनि दिए ! पार्टीको जनकपुर ब्युरो र नारायणी ब्युरोका नेता–कार्यकर्ताहरूले श्रम सहयोग गरेको भन्दै विरहीले पार्टीका तर्फबाट आभार प्रकट गरे ।
आफ्नो आवास भवन उद्घाटनका अवसरमा सल्लाहकार समितिका सचिव चित्रबहादुर आलेले उपस्थित नेता–कार्यकर्ता र गाउँबासीप्रति सम्मान प्रकट गरे । उनले भवन निर्माण गर्नका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी महासचिव विप्लव र अन्य नेताहरूप्रति पनि सम्मान व्यक्त गरे । उनले विगत सम्झिँदै भने, ‘विगतमा मेरो घरमा मोहनविक्रम, निर्मल लामा, प्रचण्ड, बाबुराम सबै आए तर मेरी जीवनसँगिनीको निधन हुँदाको घडीमा महासचिव विप्लव आउनुभयो ।’
विगत सम्झिँदै उनले भने, ‘पहिलोचोटि आउँदैमा महासचिव विप्लवको दिमागमा आले कमरेडलाई बस्नका लागि भवन आवश्यक छ भन्ने परेको रहेछ । त्यसपछि बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा महासचिव आफँैले पुराना अग्रज नेताहरू असारे काका, रामलखन महतोहरूको घर छ तर आले दाइको घर छैन । दाइको घर पार्टीले बनाइदिनुपर्छ । इमानदार पुराना वृद्ध नेताहरूलाई पार्टीले संरक्षण गर्नुपर्छ भनी प्रस्ताव गर्नुभयो ।’
आलेले सबै नेता–कार्यकर्तालाई नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट भनेको विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र रहेको र यो पार्टी वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि आइसकेको पनि बताए । वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउनका लागि एकीकृत जनक्रान्तिमा लामबद्ध भएर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न उनले कार्यकर्तालाई आह्वान पनि गरे । उक्त आवास भवनको शिलान्यास २०७३ साल चैत १७ गते महासचिव विप्लवले गरेका थिए ।
उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जनकपुर ब्युरो इन्चार्ज सन्देश पौडेलले गरेका थिए । पौडेलले भवन निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने पूर्व जिल्ला इन्चार्ज कमल सुस्लिङलाई धन्यवाद दिए । त्यसैगरी ब्युरो सदस्य आदम कबारी र लालबहादुर लामालाई पनि घर बनाउन सहयोग गरेको उले बताए ! उक्त कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य निर्मल, जनकपुरका इन्चार्ज, सेक्रेटरी र अगुवा नेता–कार्यकर्ताको उपस्थिति थियो ।
कार्यक्रममा सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलले स्वागत मन्तव्य र धनुषा इन्चार्ज राजु कार्कीले सञ्चालन गरेका थिए ।
नेकपाका इन्चार्ज कार्की र सेक्रेटरी क्षेत्री गिरफ्तार
२०७५ असाेज १७, पूर्णाङ्क १६३